बगहर्ड: पोइन्ट, क्लिक गर्नुहोस् र वेबमा सहयोग गर्नुहोस् Martech Zone
मङ्गलबार, जुन 4, 2013 सोमवार, जुन 3, 2013 Douglas Karr
यहाँ तपाईंको लागि एउटा मणि छ ... के तपाईं वेबमा समस्याहरू रिपोर्ट गर्न र कार्यहरू सम्बोधन गर्न सजिलो बनाउन अन-स्क्रीन एनोटेसनहरूमार्फत तपाईंको प्रोजेक्ट व्यवस्थापन प्रणाली एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ भने के हुन्छ? कुनै साझेदारी स्क्रिनशटहरू छैनन्, ब्राउजर संस्करणहरूको बारेमा सोच्दै, वा कुनै व्यक्ति द्वारा वर्णन गरिएको मुद्दा डिक्फर गर्नको लागि प्रयास गर्दै जुन तपाईं जस्तो प्राविधिक हुनुहुन्न। के हुन्छ यदि तपाईले पप ब्राउजर अनुप्रयोग खोल्न सक्नुहुन्छ, पोइन्ट गर्नुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् र रिपोर्ट गर्नुहोस् तपाइँको साइटको साथ तपाइँको वेब टीम वा एजेन्सीमा सिधा रिपोर्ट गर्नुहोस्?
अब तपाईं सक्नुहुन्छ - संग बगहर्ड। बगहर्डले तपाईंलाई प्रतिक्रिया क्याप्चर गर्न, मुद्दाहरूको समाधान गर्न, र वेब प्रोजेक्टहरू सहजै प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईको कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सबै डेटाको साथ बगहर्डले शक्तिशाली बग रिपोर्टमा साइट एनोटेशनहरू परिवर्तन गर्दछ। हेर्नुहोस् विश्वास गर्दै:
यहाँ बगहर्डका केही सुविधाहरू छन्
मुद्दाहरूको लागि सीधा लिंक - एक मुद्दा रिपोर्ट गरिएको थियो जहाँ सीधा जम्प गरेर समय बचत गर्नुहोस्।
फाइल संलग्नकहरू - अतिरिक्त फाईलहरू जस्तै चश्मा, लगहरू वा मकअपहरू अपलोड गर्नुहोस्।
पूर्ण चयनकर्ता डाटा - रिपोर्ट गरिएको मुद्दाहरूको लागि पूर्ण चयनकर्ता, समस्या निवारण पीडारहित बनाउँदै।
वास्तविक समय छलफल - वास्तविक-समय टिप्पणी फिड प्रयोग गरेर सञ्चार गर्नुहोस्।
स्वचालित स्क्रिनशटहरू - ब्राउजर एक्स्टेन्सनले स्वचालित रूपमा स्क्रीनशटहरू संलग्न गर्दछ।
इनलाइन ट्याग गर्दै - संगठित गर्न र तपाइँको प्रतिक्रिया, मुद्दाहरु र सुविधा अनुरोधहरु समूहबद्ध गर्न।
ब्राउजर र ओएस - जब एक मुद्दा रिपोर्ट गरिएको थियो दस्तावेज।
स्क्रीन आकार र रिजोलुसन - विन्डो आकार र रिजोलुसनको साथ लेआउट मुद्दाहरूको समाधान गर्नुहोस्।
एकीकरण संग Github, Segment.io, जिरा, बेसकैम्प र क्याम्पफायर, Zendesk र Redmine
टैग: 37ignignalsBasecampबुगर्डक्याम्पफायरसहयोगडिजाइन सहयोगGitHubJiraयोजना व्यवस्थापनRedmineSegment.ioकार्य व्यवस्थापनवेब डिजाइनजेन्डेस्क
गुगल एल्गोरिथ्ममा २०० स्तर निर्धारण कारकहरू
BugHerd ले तपाईंलाई प्रतिक्रिया क्याप्चर गर्न, मुद्दाहरूको समाधान गर्न, र वेब प्रोजेक्टहरू सहजै प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ।
जुन 10, 2013 मा 1: 04 PM
म जहिले सास अनुप्रयोगहरू आजकल छन् भनेर छक्क पर्छु। व्यवसायका धेरै पक्षहरूको आफ्नै सानो सहयोगी छ।
जुन २,, २०१ बिहान :19:२२ बिहान
यदि यो आफ्नो आश्वासनको लागि जीवित छ भने, यो निश्चित रूपमा मूल्य लायक। डग्लास प्रयोग गरेर तपाईसंग कुनै अनुभव भएको छ?